आईजीपी खनाल आएपछि ४ सय ९५ जवानदेखि एसएसपी कारवाहीमा, को-को परे? – मुलधार न्युज
Home > प्रशासन > आईजीपी खनाल आएपछि ४ सय ९५ जवानदेखि एसएसपी कारवाहीमा, को-को परे?
४ आश्विन २०७५, बिहीबार ०८:२८
काठमाडौं -सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी भएपछि ४ सय ९५ प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीमा परेका छन्। सुन तस्करीकाण्ड र सनम शाक्य हत्याको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ जना एसएसपी, १ एसपी, २ डिएसपी, १ जना र १ जना जवान गरी ७ जनालाई निलम्बन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
उनीहरुसहित बैशाखमा १ सय ६५ प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए। जसमा २ एसएसपी, २ एसपी, २ डिएसपी, २ प्रहरी निरीक्षक, ६ असई, ६ सई, २२ हबल्दार, १ सय २० प्रहरी जवान र ३ कार्यालय सहयोगी छन्।
कारबाही भएका मध्ये २४ जनालाई नोकरीबाट निस्काशन गरिएको छ। जेठमा २ प्रहरी निरीक्षकदेखि ३६ प्रहरी कारबाहीमा गरेका छन्। जसमा २ प्रहरी निरीक्षक, २ सई, ८ असई, ७ हबल्दार, १६ प्रहरी जवान र १ कार्यालय सहयोगी छन्। उनीहरु १० प्रहरी जवान र २ हबल्दार गरी १२ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ।
असारमा १ सय ६५ जना प्रहरी कर्मचारी कारवाहीमा परेका थिए। ३ प्रहरी निरीक्षक, १६ सई, ११ असई, १२ हबल्दार, १२१ जवान र २ कार्यालय सहयोगीले कारवाही भोगेका छन्।
४ जना सईसहित २४ जनालाई नाकरीबाट निष्काशन गरिएको छ। साउनमा २ डिएसपी, ८ सई, ७ असई, १६ हबल्दार, ९३ प्रहरी जवान र ३ कार्यालय सहयोगीसहित १२९ जना कारवाहीमा परेका छन्। उनीहरु १ जना सई, १४ जना हबल्दार, १५ जवान र २ कार्यालय सहयोगी गरी ३२ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ।
अघिल्लो वर्षकै यही चार महिनामा ७ सय २२ प्रहरी कर्मचारी कारवाहीमा परेका थिए। अहिले यो संख्या घटेर ४ सय ९५ मा झरेको छ। यसलाई अझ कममा झार्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० बुँदे संगठन सुधारको कार्ययोजना समेत अघि सारेको छ।